गैंडाको चोरी सिकार ठप्पजस्तै | चितवन पोष्ट दैनिक
गैंडाको चोरी सिकार ठप्पजस्तै
२०७० फाल्गुन ५, सोमबार १४:५८ गते
कसरा । दुर्लभ वन्यजन्तुको चोरी तस्करी अहिले विश्वव्यापी समस्या बनेको छ । तर नेपालमा संरक्षण कार्य प्रभावकारी बन्दा पछिल्लो समय चोरी सिकार ठप्पजस्तै भएको छ । चितवन निकुञ्जले यो पटक पनि शून्य चोरी सिकार वर्ष मनायो ।
चितवन निकुञ्जमा गत वर्षको फागुन ५ गते चोरी सिकारीले मारेको खागविहीन मृत गैंडा फेला परेको थियो । त्यसयता चोरी सिकारीले गैंडा नमारेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले जानकारी दिए ।
विसं. २०६७ पुस १९ यता कुनै पनि गैंडा चोरी सिकारीका कारण मरेका छैनन् भन्ने दावीका साथ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागकै सक्रियतामा पहिलो पटक ६८ सालको पुस १९ मा शून्य सिकार वर्ष (जिरो पोचिङ एयर) मनाइएको थियो । यस पटक पनि निकुञ्ज मुख्यालय कसरामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा आगामी चुनौतीका बारेमा चर्चा भए ।
पहिलो शून्य सिकार वर्ष मनाएपछि चोरी सिकारीले विसं. २०६८ सालको चैत्र २० गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा एउटा गैंडा मारेका थिए । शून्य सिकार वर्षको कार्यक्रम मनाएको तीन महिना नहुँदै खागका लागि सिकारीले गैंडा मारेपछि संरक्षणकर्मीमा खिन्नता छाएको थियो ।
६८ सालको चैतमा गैंडा मारेको एक वर्ष नपुग्दै गत वर्षको फागुनमा चोरी सिकारीले फेरि गैंडा मारेपछि निकुञ्ज प्रशासनले सुरक्षा सक्रियता बढाएको थियो । जसका कारण विगत ३६५ दिनमा कुनै गैंडा नमरेको निकुञ्ज प्रशासनको दावी छ । चितवनमा नेपालकै सवैभन्दा धेरै ५०३ गैंडा छन् ।
नेपालभर ५३४ गैंडा छन् । विसं. २०५८ सालमा चोरी सिकारीले एकै वर्षमा ३७ वटा गैंडा मारेका थिए । गैंडा मारेमा वा त्यसको अंग बेचबिखन गरेमा ५० हजारदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना, पाँचदेखि १५ वर्षसम्म जेल वा जेल र जरिवाना दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । गैंडाको नाकमाथि हुने खागका लागि यसको अवैध सिकार हुने गर्छ ।
‘यो ३६५ दिनको अवधिमा गैंडा मार्ने ४४ जनालाई समाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म खाग पु¥याउनेहरु गिरफ्तार भए । संरक्षणमा बढेको जनचेतना र स्थानीयको जागरूकताले पनि हामी सफल भएका हौँ’ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरले जानकारी दिए । निकुञ्जले चोरी सिकारविरूद्ध सुराकी सञ्जाललाई मजबुद बनाएको उनले बताए ।
निकुञ्जमा हाल १२३ ठाउँमा पोष्टहरु रहेका छन् । त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोग पनि बढाएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हवाइ गस्तीदेखि मानवरहित ड्रोन र तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन गरेका छौं’ निकुञ्जमा तैनाथ नन्दाबक्स गणका प्रमुख चक्र शाहले भने । निकुञ्जमा नन्दा बक्ससहित रणदल गुल्म पनि तैनाथ छ । कुल ११ सय सेना निकुञ्जमा छन् ।
‘हाम्रो मात्रै नभएर समुदायको ठूलो सहयोगले अकल्पनीयजस्तो लाग्ने शून्य चोरी सिकार यहाँ सम्भव भएको हो’ शाहले भने । नोपलमा नियन्त्रणमा आए पनि विश्वका अन्य क्षेत्रमा चोरी सिकार निकै फष्टाएको छ । त्यसैले नेपालमा मिलेको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि खुसीको कुरा हुन सक्ने निकुञ्जका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवरका अनुसार सन् २०१३ मा दक्षिण अफ्रिकामा चोरी सिकारीका कारण एक हजार चार गैंडा मरे । त्यस्तै केन्यमा ५० र भारतको काजिरंगा नेशनल पार्कमा ३५ गैंडा मरेको उनले जानकारी दिए । यस्तो अवस्थामा नेपालमा चोरी सिकार रोकिनु यहाँ संरक्षण कार्य सुदृढ बनेको प्रमाणित हुने कुँवर बताउँछन् ।
नेपालमा कुनै बेला वर्षको ३७ वटासम्म गैंडा चोरी सिकारीका कारण मरेका थिए । ‘जहामीले निकुञ्जभित्रको सुरक्षा अवस्थालाई मजबुद बनाउँदै स्थानीयलाई पनि जागरूक बनाउँदै लग्यौं, त्यसपछि परिणाम राम्रो आउन लागेको हो’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत कुँवरले भने । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो वन्यजन्तु तस्करीविरूद्ध पनि सक्रिय हुन थालेको छ ।